XOG: Maxay tahay sababta madaxweyne Farmaajo u xali la’yahay Khilaafka Aqalka sare & Golaha shacabka? – War La Helaa Talo La Helaa
XOG: Maxay tahay sababta madaxweyne Farmaajo u xali la’yahay Khilaafka Aqalka sare & Golaha shacabka?
Guddoomiyaha Golaha Aqalka sare ee Baarlaamaanka Soomaaliya Senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa xalay hooygiisa kula kulmay Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheikh C/raxmaan.
Senator Cabdi Xaashi iyo Guddoomiye Mursal ayaa ka wada hadlay sida ugu haboon ee wada shaqeyn buuxda ku dhexmari karto maadaama Labada Baarlamaan mudo wax wada shaqeyn dhexmarin,islamarkaana ragaadiyay khilaaf salka ku haayo arrimaha awooda labada Baarlamaan.
Aqalka Sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa shaaciyay inaanu la shaqeyn karin Golaha Shacabka ee dalka oo uu ku eedeeyay arimo ay ka mid yihiin inuu hareer maray habraaca dastuurka ee meelmarinta sharciga xisaab xirka, iyo wada shaqeyn la’aan ku aaddan xiriirka dibedda ee baarlamaanka federalka.
Madaxweyne Farmaajo ayaa ku guuldareystay inuu xaliyo Khilaafka Baarlaaanka Soomaaliya Golaha Shacabka iyo Aqalka sare,wuxuuna dhowr jeer uu kulmiyeyay Labada Guddoomiye suurta gelin iney ka gudbaan khilaafka si wadajir ahna u shaqeynayaan.
Lama oga kulanka xalay dhexmaray Labada Guddoomiye ee Baarlamaan waxa kulankooda ka bedeli doon xaaladda haatan ay ku sugan ee wada shaqeyn la’aanta.
Dad rayid ah oo mar kale lagu laayay magaalada Gaalkacyo
Akhriso: Khilaaf Dastuuri ah oo ka dhex Qarxay Wasaaradda Cadaaladda iyo Maxkamadda Sare